Tsangambato manan-danja ao Espaina: Avy amin'ny Alhambra ka hatrany amin'ny Segovian Alcazar | News Travel
Louis Martinez | 14/05/2022 17:00 | kolontsaina, España
miresaka aminao momba tsangambato manan-danja ao Espaina Heverina fa hanao ezaka amin'ny fahafoizan-tena sy ny synthesis izany. Satria ny firenentsika dia manana tantara an-jatony maro izay niteraka lova mahatalanjona sy ara-javakanto tsy mampino sy midadasika.
Ny Grika, ny Romanina, ny Visigoths, ny Arabo ary ny olona hafa dia nandalo ny Saikinosy Iberiana. Samy namela lova mifandraika amin'ny endrika trano sy kolontsaina. From Asturias ny Andalusia ary avy Extremadura ny Aragon, ireo teboka kardinaly efatra amin'ny firenentsika dia manana trano mendrika ny fitsidihanao ary anisan'ny be mpitsidika indrindra manerana izao tontolo izao. Saingy, na izany na tsy izany, dia hasehontsika anao ny fifantenana ireo tsangambato manan-danja ao Espaina.
2 Ny fianakaviana masina
3 Ny katedraly, tena ilaina amin'ireo tsangambato manan-danja ao Espaina
4 Moske ao Cordoba
5 Alcázar de Segovia, trano mimanda anisan'ny tsangambato manan-danja ao Espaina
Tokotanin'ny Liona, ao amin'ny Alhambra any Granada
Ny asa an-tampony amin'ny maritrano Andalusia, ny Alhambra dia tsy tsangambato, fa vondron'izy ireo. Eo ambanin`io anarana io dia ahitana ny trano mimanda Arabo, zaridaina tsara tarehy, lapa tranainy ary na dia monasitera taty aoriana niova ho trano fandraisam-bahiny mpizaha tany.
Afaka miditra amin'ny varavarana ianao amin'ny alàlan'ny varavarana maromaro. Anisan'izany ny fitaovam-piadiana, ny rariny, ny divay, ny rihana fito na ny Arrabal. Amin'ny lafiny iray, ao amin'ny trano mimanda ny Homenaje sy Vela tilikambo. Fa ny tena zava-mahatalanjona miandry anao dia ao amin'ny Medina. Misy ny lapa izay misongadina roa. Ny avy any Comares naorina manodidina ny Patio de los Arrayanes tamin'ny taonjato faha-XNUMX, raha ny liona naorina manodidina ny zaridaina mitovy anarana.
Hitanao koa ny antso Mexuar, efitra nampiasaina mba hanomezana rariny sy, tao amin’ny faritr’i Partal, ny sisa tavela tamin’ireo lapa tranainy hafa. Amin'ny lafiny iray, miaraka amin'ny anarana Efitry ny Emperora vondrona efitra naorina tamin'ny andron'ny Carlos i. Na izany aza, tsy ho ela dia ho lasa tsy ampiasaina izy ireo rehefa ny lapan'ny natao ho an’ny Emperora.
Adidy ao amin'ny Alhambra koa ny mandalo ny mandeha amin'ny tilikambo, izay, araka ny anarany, dia mitondra anao hahita an'i Los Picos, la Cautiva, las Infantas ary del Agua. Fa ny firavaka lehibe hafa amin'ity complex monumental ity dia ny Generalife. Villa ambanivohitra voahodidin'ny zaridaina haingon-trano sy zaridainam-boankazo ampiasain'ny mpanjakan'i Granada ho toeram-pialan-tsasatra. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ihany koa izy io ary, manodidina azy, dia afaka mahita fanorenana hafa tamin'ny vanim-potoana Nasrid koa ianao. Anisan'izany ny Seza Moor, la dobo vaky na ny sisa tavela amin'ny Lapan'i Dar-al-Arusa.
Ny fianakaviana masina
Ny Sagrada Familia, iray amin'ireo tsangambato manan-danja ao Espaina
Ity fanorenana ara-pivavahana ao Barcelona ity dia asan'ny sangany Antonio gaudi. Ohatra iray ihany koa anefa fa ny asa lehibe dia azo amboarina amin'ny fomba manokana feno fantasy. Ny anarany feno dia Tempoly Expiatory an'ny fianakaviana masina ary nanomboka tamin'ny 1882 ny mpanao mari-trano Katalana miavaka.
Mahagaga fa mbola tsy vita ilay izy, fa iray amin'ireo tsangambato be mpitsidika indrindra any Espaina. Izy io dia maneho ny fahamaroan'ny famoronana an'i Gaudí ary izy no tsara indrindra Catalan modernist architecture. Raha ny marina, dia mampifanaraka tsara ny fomba rehetra novolavolainy hatramin'izay. Eo anelanelan'ireo, ny neogothic, ny naturalista na ny geometrika.
Ny tempoly dia manana drafitra latinina lakroa misy nave afovoany dimy ary misy telo. Izy io koa dia misy apse misy trano fiangonana fito. Ny ivelany dia manana facade telo, voatokana ho amin’ny fahaterahan’i Jesosy, ny fijaliany ary ny voninahiny. Toy izany koa, rehefa vita izany, dia hanana tilikambo valo ambin'ny folo, izay hisongadina ny afovoany, miafara amin'ny dome ary mirefy dimy amby fitopolo amby zato metatra ny haavony.
Mikasika ny atitany kosa dia mahavariana ihany koa ny Sagrada Familia. Ny fahaiza-manaon'i Gaudí dia namorona habaka organika izay mitovitovy amin'ny ala, misy andry miendrika vatan-kazo. Ho an'ny ampahany, ny vaults dia manana endrika hyperboloid ary ny varavarankely dia zaraina amin'ny fomba ahafahan'ny jiro mirindra sy malefaka hiditra. Toy izany koa, ny zava-drehetra ao amin'ny tempoly dia manana lanja ara-panoharana ary i Gaudí aza dia nikarakara ny famolavolana ireo singa haingon-trano. Toy izany ny polipitra, konfesy na lectera.
Raha fintinina, mahagaga ny Sagrada Familia noho ny lehibe Antonio Gaudí. Ny toetrany tsy manam-paharoa sy ny fiandrianany dia mahatonga azy ho iray amin'ireo tsangambato manan-danja ao Espaina.
Ny katedraly, tena ilaina amin'ireo tsangambato manan-danja ao Espaina
Misy katedraly be dia be sy mahavariana any Espaina, ka tsy tiana holazaina aminao ny momba ny iray, fa ny maromaro. Angamba ny be mpitsidika indrindra dia ilay any Seville noho ny antony maro, ankoatry ny toetrany mahatalanjona. Anisan'izany ny iray amin'ireo katedraly Gothic lehibe indrindra eto an-tany. Saingy, angamba, misy fiantraikany amin'ny fananana ny malaza ihany koa Giralda. Tany amin’ny moske tranainy tamin’ny taonjato faha-XNUMX io minaretan’ny andron’ny Arabo io ary nampiasaina ho tilikambo lakolosy ho an’ny tempoly. Voatahiry hatramin'izay koa ny sarobidy Tokotanin'ny hazo Orange.
Ankoatra izany, dia be mpitsidika Katedraly Santiago de Compostela, sady toerana fanaovana fivahiniana masina no ho firavaka romanina. Ny fomba no mibahan-toerana ao amin'ny fanorenana, fa manolotra ny Gothic, Renaissance, Baroque ary na dia ny Neoclassical singa. fahagagana toy ny Ny fasan'i Obradoiro na ny Portico of Glory ataovy asa miavaka ity katedraly ity.
Saingy tsy afaka manadino ny momba ny Katedraly Burgos, miaraka amin'ny fomba gôtika frantsay malaza indrindra. Nahazo fanovana taty aoriana koa izy io. Fa raha manaitra ny ivelany dia tsy latsak'izany ny ao anatiny. Izy io dia ahitana firavaka tena izy amin'ny sculptural sy architectural toy ny Tohatra volamena, ny alitara gothic an'i Gil de Siloé na ny maro fasana anisan'ny misongadina ny cid. Toy izany koa ny original flycatcher, rafitra mivoha izay manokatra ny vavany rehefa maneno ny kalesy.
Afaka milaza aminao momba ny katedraly tsara tarehy hafa izay anisan'ny tsangambato manan-danja ao Espaina. Ohatra, an'i Murcia, ny avy any Salamanca o Almudena's any Madrid. Na izany aza, aleonay mifindra any amin'ireo tranobe hafa miavaka.
Tazana avy any an-danitra ny Moske de Cordoba
Izany no trangan'ny Moske Córdoba mahavariana, izay, na izany aza, amin'izao fotoana izao Katedraly ny Assumption of Our Lady. Miaraka amin'ny efatra arivo sy roa alina metatra toradroa, io no faharoa lehibe indrindra eran-tany taorian'i La Mecque.
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ny fanorenana azy ary izy io, miaraka amin'ny Alhambra, no tsangambato manan-danja indrindra voatahiry tamin'ny Art Andalusia. Nohavaozina imbetsaka ihany koa anefa izany. Raha ny marina, ny sasany amin'ireo varavarany, toy ny ao anatiny Saint Catherine renaissance izany. Iray amin'ireo zavatra maro mandrafitra ny ivelan'ny trano izy io, izay misy ny tilikambo lakolosy sy ny minaret taloha, ny lavarangana toy ny eo amin'ny fasade atsimo ary ny patio toy ny eo amin'ny ny hazo voasary.
Ity farany dia avy amin'ny toeram-pisakafoanana ao amin'ny moske voalohany ary manana loharano toa an'i Santa María na Cinamomo ary famorian-drano toa an'i Almanzor. Raha ny anatiny, dia malaza be ny trano hypostyle, miaraka amin'ny andry sy andohalambony. Fa koa ny alitara Mannerista ao amin'ny trano fiangonana lehibe, ny antoko mpihira na ny trano fiangonana samihafa. Anisan'izany ny tena izy, ny an'i San Ambrosio, ny an'i Villaviciosa na ny an'ny Our Lady of the Conception.
Alcázar de Segovia, trano mimanda anisan'ny tsangambato manan-danja ao Espaina
Ny Alcazar manaitra avy any Segovia
Io lapa mijoalajoala tamin'ny taonjato faha-XNUMX io no be mpitsidika indrindra amin'ny karazana any Espaina. Mijoro eo ambonin'ny Lohasahan'ny Eresma ary manjaka ny tanàna Castilian manan-tantara. Mpanjaka roa amby roapolo sy ny sasany amin'ireo olo-malaza indrindra teo amin'ny tantara no nandalo tao. Izy io koa dia iray amin'ireo ohatra tsara indrindra momba ny trano mimanda miaramila tamin'ny taonjato faha-XNUMX eran-tany.
Eo ivelany, ny Alcázar dia mizara amin'ny tokotanin'ny Herrerian miaraka amin'ny moat, drawbridge ary fitehirizana, manaitra miaraka amin'ny drafitra efa-jorony sy tilikambo efatra. Fa ny tena mahavariana dia ny John II tilikambo, izay taty aoriana sy Gothic, ary koa ny antsoina hoe Terrace Moorish, izay manome anao fomba fijery mahafinaritra ny Plaza de la Reina Victoria Eugenia.
Raha ny anatiny, ny trano mimanda dia manana efitra mahatalanjona. ny ny Lapa Taloha misongadina izy noho ny varavarankely kambana sy ny zana-kazony; ny ny am-patana ho an'ny sariny sy ny lambany; ny iray amin'ny seza fiandrianana ho an'ny seza fiandrianany eo ambanin'ny tafo sy ny an'ny ny galeria Nahazo an'io anarana io izy noho ny valindrihana tranainy efa tranainy miendrika vavonin'ny sambo mivadika. Ny efitranon'ny mpanjaka, ny trano fiangonana ary ny efitrano hafa toy ny efitrano fiadiana dia mameno ny atitany amin'ny Alcázar.
Farany, eo amin'ny lafiny iray amin'ny kianjan'ny parade dia hitanao ny Museum ny Royal College of Artillery. Ary, amin'ny maha-anékdota azy, dia holazainay aminao fa ny endrik'ity fanorenana ity dia tena mahafinaritra sy manoro hevitra ka lazaina fa natao ho modely ho an'ny Walt disney ho an'ny lapanao Cinderella. Tsy kisendrasendra ny fandraisana mpitsidika avy amin’ny lafivalon’izao tontolo izao.
Ho famaranana, nasehonay anao ny sasany tsangambato manan-danja ao Espaina. Saingy afaka nilaza taminao momba ny maro hafa izahay. Ohatra, ireo izay mandrafitra ny Asturian pre-Romanesque, miavaka amin’ny planeta manontolo. Na koa ny majestic Teatra romana an'i Merida, naorina tamin'ny taonjato voalohany talohan'i JK ary mbola ampiasaina amin'ny fampisehoana. Na, farany, ny majestic Monasiteran'ny San Lorenzo del Escorial, vatosoa Renaissance izay nantsoina hoe fahagagana fahavalon’izao tontolo izao. Izany rehetra izany dia tsy manadino ny hafa toy ny Bazilika an'ny vadin'ny Andry any Saragossa, ny mandan’i Avila na ny tilikambon'i Hercules tao La Coruña, izay nijoro nandritra ny roa arivo taona. Tsy heverinao ve fa mahafinaritra ny tsangambato manan-danja ao Espaina?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Tsangambato manan-danja ao Espaina
Ny fialan-tsasatra tsara indrindra hankafizana ny fizahan-tany an-tendrombohitra